All news | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 3
All news	Hay’ad hoos tagta Alshabaab oo xoolo ku daweysay jubada dhexe(Sawiro+Dhageysi).
Xooluhu waa hantida koowaad ee soomaalida waxaana ku dhaqan dadka miyiga iyo kuwa magaalada intaba. waxay u baahan yihiin in laga taxadero oo aad loo dhaqaaleeyoo sida in la geeyo meel biyo iyo baad leh cuduradana laga daweeyo. hay’adda Al ixsaan ayaa dhawaan xoolo badan ku daaweysay deeganao ka tirsan gobalka jubada dhexe gaar ahaana degmada buu’aale. Geel, ari iyo ...	Read More »
Dhageyso Warka Subaxnimo
Si aad u Hesho Wararkii u dambeeyay, dhageyso Warka Subaxnimo ee Warbaahinta Islaamiga ah ee Al-furqaan. Halkaan Ka Dhageyso Warka Subax 23 03 2017 Read More »
Ciidamada Al-Shabaab oo howlgallo ka fuliyay gobolka Jubbada Hoose.
Jabhadda Wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka ayaa habeenkii xalay waxay weeraro ku qaaday Difaacyada ciidamada dowladda iyo kuwa Gumeysiga Kenya ay ku leeyihiin deegaanno katirsan gobolka Jubbada hoose. Ciidamo aad u qalabeysan oo katirsan Mujaahidiinta ayaa saqdii dhexe ee xalay waxay weerareen difaac dhawaan ciidamada dowladda ay ka sameysteen nawaaxiga Akadeemiyada oo ku taalla meel u dhow jaamacadda magaalada Kismaayo. Difaacan ...	Read More »
Dagaal Culus oo Xalay ka dhacay Baraawe.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay waxay weerar culus ku qaadeen fariisin milliteri oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin magaalada Baraawe. Ciidamada Mujaahidiinta oo aad u hubeysnaa ayaa dagaal adag waxay la galeen kuwa dowladda, iyagoona ku qasbay iney ka cararaan goobta la weeraray, islamarkaana u baxsadaan dhanka saldhiga magaalada oo meel udhow difaacyo ...	Read More »
Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada.
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa lagu soo qaataa wararkii u dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah oo dhinacyo kala duwan lala yeesho. Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada Halkaan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 22 03 2017	Read More »
Xarunta Baarlamaanka Ingiriiska oo la weeraray.
Qof kaxeyay Gaari ayaa jiiray kudhowaad 5 Ruux oo marayya buundo u dhow xarunta baarlamaanka Ingiriiska uu ku leeyahay magaalad London ee caasimadda wadankaas. Qofka Gaariga kaxeynayay ayaa jiiray derbiga xarunta Baarlamaanka, waxaana lagu soo waramayaa inuu dilay hal ruux, isagoona dhaawacay tiro intaas kabadan. Qofkan weerarka fuliyay oo adeegsanaya Mindi ayaa sidoo kale dhaawacay Askari Booliis ah oo ku ...	Read More »
Sawirro: Jamciyadda Al-Ixsaan Al-Khayriyah oo Raashiin ka qeybisay Kurtun-Waaray.
Jamciyadda kheyriga ee Al-Ixsaan ayaa gurmad la gaartay degmada Kurtun-Waaray oo kamid ah degmooyinka gobolka Shabeellaha hoose. Waxaa degmada ku nool dad ku saamoobay Abaaraha, islamarkaana ka yimid deegaanno hoosyimaada Kurtun-Waaray. Dhawaan ayaa Jamciyadu waxay degmadaas Raashiin ugu qeybisay dad cadadoodu gaareyso 214 Ruux.	Read More »
Dhageyso Warka Duhurnimo.
Si aad u hesho wararkii u dambeeyay, dhageyso warka duhurnimo war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan. Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo	Read More »
Dowladda Maraykanka oo mamnuucday in Qalabyada Electroniga lala raaco diyaaradaha ku wajahan dalkeeda.
Maraykanka oo wajahay dagaal furan oo Amni ah ugana imaanaya Jamaacada Jihaadiga ee Al-Qaacida ayaa soo saaray go’aan uu isleeyahay waxaad ku yarayn kartaa qatarta kaaga imaan karta Muslimiinta Mujaahidiinta ah. Go’aan kasoo baxay dowladda Maraykanka ayaa lagu sheegay inaanan diyaaradaha kusoo wajahan dalkeeda, kana imaanaya dalal katirsan Muslimiinta aan lala soo raaci Karin qalabyada Electroniga iyo korontada, islamarkaana dadku ...	Read More »
Dhagayso Warka Subaxnimo.
Si aad u hesho Wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso wararka ka baxa Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War Subax 22 03 2017.lite Read More »
Page 3 of 210«12345	»	102030...Last »	GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan